🥇 ▷ Bixiyeyaasha saldhigyada gaaska ee la bartilmaameedsaday $ 20: khayaanada kaarka ✅
Bixiyeyaasha saldhigyada gaaska ee la bartilmaameedsaday $ 20: khayaanada kaarka
Waxaad gashanaysaa saliida Mareykanka. Tuubada waxaad ka soo qaadaysaa tuunbada, ka dibna ku dhaaf kaarka marinka ay keento, waxaad gashaa PIN si aad u bixiso oo waad tageysaa. Iyo halka nin dhinaca kale ee wadada jooga uu soo dejinayo xogtaada oo dhan, oo ay ku jiraan lambarrada kaarka iyo PIN. Waa khayaano leh ‘skimmer’, mana ka hadlayno aaladda sida caadiga ah lagu rakibay barkadaha dhexdooda waana waxa ugu horreeya ee soo baxa marka la raadinayo Google.
Qalliinku waa iska fudud yahay: iibsiyada cybercriminal aaladda ‘skimimming’ ‘oo badanaa aan ka badnayn $ 20, wuxuu tagaa xarun gaas, wuxuu furaa furaha isagoo adeegsanaya furaha mashiinka guud – oo la jaan qaada saldhigyada inta badan saldhigyada gaaska -, wuxuu dhigayaa ‘skimmer’ wuxuuna ka tagaa wax walba sida ay tahay. Qalabka wuxuu ku xiran yahay labadaba furaha lambarrada iyo xargaha magnetic ee kalasaarka, iyadoo la adeegsanayo qalabka loo yaqaan ‘bluuter’ si loogu diro xogta marinka helaya.
Dembiilaha ayaa leh oo keliya la xiriir PC-ga si aad u soo dejiso dhammaan xogta la gaarey, haddii ay dhacdo in macaamiisha ay ku bixiyaan kaarka waxaan uga hadlaynaa nambarrada, PIN-ka iyo xitaa lambar koodhkooda. Maalgashiguna, dabcan, waa mid faa iido leh: jabsiye isticmaalaya qalab barafka lagu dhammayn karo ilaa $ 4,000 maalintii, tiradaasi waxay sidoo kale kuxirantahay tirada dadka isticmaalaya xarunta gaaska iyo alaab-qeybiyeyaasha jabsada, iyo awooda dambiilaha xog la helay.
UCSD Jacobs School of Engineerin ‘); been ku noqo; “class =” item-multimedia “>
Afar ka mid ah aaladda Skimmer-ka oo lagu ridayo bambooyinka
UCSD Jacobs School of Engineerin
Waana sax in hadda burcad badeed badan ay ka faaiideysanayaan xaqiiqada ah in saldhigyada gaaska ee Mareykanka ay yihiin qaadashada si gaar ah u qaadashada nidaamyada amaah bixinta iyo kaarka deynta chip Xaqiiqdii, Visa iyo MasterCard waxay raadinayaan dhammaan saldhigyada gaaska ee Mareykanka inay isticmaalaan nidaamyada lacag bixinta chip kaliya Oktoober 2020.
A app anti-skammer
Dhibaatada ayaa ah in lagu ogaado alaab-qeybiyeyaashan jabsaday waa lagama maarmaan Shaqaalaha booliis iyo celcelis 30 daqiiqo in lagu helo. Si looga caawiyo la dagaalanka tan, koox saynisyahano ah oo ka socda jaamacadaha San Diego iyo Illinois ayaa soo saaray a Codsi mobiladeed oo u oggolaanaya in lagu ogaado aaladda skimmer 3 ilbiriqsi gudahood.
Wacitaanka Bluetana, tani waxay adeegsaneysaa algorithm u gaar ah Kala saar calaamadaha Bluetooth-ka ee aaladaha caadiga iyo kuwa skimmer-ka la rakibay alaab-qeybiye. Sidan, tilmaanta moobaylka ayaa ku filan in la arko kuwa la jabsaday iyo kuwa aan ahayn. Nidaamka algorithm-ka ayaa la sameeyay ka dib markii la falanqeeyay baaritaannada qalabka aaladda Bluetooth ay qaadeen kormeerayaasha oo ay la socdaan 1,185 saldhig shidaal oo ku yaal 6 gobol oo Mareykanka ah.
Barnaamijka ‘Bluetana app’ ee lagu ogaanayo Skimmers-ka
Sannadkiisii ​​ugu horreeyay ee hawlgal waxay horay u ogaatay 42 skimmers 3 gobol, dhammaantood waa la baabi’iyey durba, oo ay ku jiraan laba skimmers “taasi waxay ku guuleysatay inay ka fogaato in la ogaado 6 bilood ”. Xitaa abuurayaasheeda ayaa la yaaban heerka guusha ee barnaamijka, taas oo sida iska cad u adeegsan doonta kormeerayaasha, oo sidoo kale leh waxyaabo farsamo oo Adeeg sir ah oo aad u sir ah dalka Mareykanka.